​१ खर्ब ७ अर्व ६६ करोड रेमिट्यान्स भित्रियो, साढे २७ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना भदौमा रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम साढे २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । १ वर्षअघिसम्म घट्दो क्रममा रहेको रेमिट्यान्स वृद्विदरले सुधारको संकेत दिएको छ । गत..
भत्ता बढाउन माग गर्दै राष्ट्र बैंकका एमालेका कर्मचारी धर्नामा
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु आइतबारदेखि कार्यालयको काम ठप्प पारेर धर्ना बस्न सुरु गरेका छन्। सेवारसुविधा बढाउनुपर्ने लगायतका ३७ सूत्रीय माग राख्दै एमालेनिकट नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघले आइतबारदेखि अनिश्चतकालसम्म कार्यालय..
​घरेलु कामदार विदेशमा पठाउने ४९ वटा म्यानपावर छनौट (सुचिसहित)
काठमाडौं । सरकारले विदेशमा घरेलु कामदार पठाउन ४९ वटा म्यानपावर कम्पनी छनौट गरेको छ । मुल्यांङ्कन समितिले आवश्यक कागजात छानविन गरि यी संस्था छनौट गरेको हो । तर वैदेशिक रोजगार विभागले..
​दशैँ बिदापछि कार्यालय नजाने ८० कर्मचारी कारबाहीमा
रसुवा । दशैँ बिदापछि कार्यालयमा उपस्थित नहुने रसुवाका ८० जना कर्मचारीलाई स्थानीय प्रशासनले कारबाही शुरु गरेको छ । रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी थापाका अनुसार कार्यालयमा उपस्थित नहुनेमा १४ कार्यालय..
​बैदेशिक रोजगारीमा जाने एक लाख ५० हजार कामदारलाई सीपमुलक तालिम
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले गन्तव्य मुलुकमा काम गर्ने नेपाली कामदारको सुरक्षा र संरक्षणमा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भएको..
​कार्यकारी अधिकृत एक लाख घुस सहित पक्राउ
नेपालगन्ज । त्रिपुर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत जितबहादुर केसी एक लाख घुस सहित पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्पर्क कार्यालय कोहलपुरबाट खटिएको टोलीले केसीलाई बुधबार रंगेहात पक्राउ गरेको हो। नगरपालिकाको..
​बढी भाडा लिने सवारीलाई कारबाही सुरु, यातायात व्यवस्था विभागले बनायो पाँचवटा अनुगमन टोली
काठमाडौँ । दसैँमा घर जाने यात्रुसँग बढी भाडा लिएको गुनासो आउन थालेपछि यातायात व्यवस्था विभागले पाँचवटा अनुगमन समूह बनाई काम सुरु गरेको छ । राजधानीबाट लामो दूरीमा जाने सवारी साधनले नयाँ..
जिविस काठमाडौंका सवइन्जिनियर २ लाख घुससहित पक्राऊ
काठमाडौं । जिल्ला विकास समिति अन्तर्गतको प्राविधिक कार्यालय काठमाडौंमा कार्यरत सव(ईन्जिनियर शरदकुमार श्रेष्ठ घुुससहित पक्राउ परेका छन् । सेवाग्राहीबाट लिएको दुई लाख नगदसहित श्रेष्ठलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको टोलीले पक्राउ..
​५० हजार पूर्वभारतीय सैनिक पेन्सनबाट बञ्चित
पोखरा । भारत सरकारबाट अनेकौँ नचाहिने किसिमका कागजपत्र खोज्दा ५० हजारभन्दा बढी भूपू सैनिक, प्रहरी र अन्य सेवाका भूपू र तिनका आश्रित परिवार पेन्सन पाउनबाट बञ्चित भएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय भूपू..
​क्यासिनो प्राइड सञ्चालन अनुमति दिन माग
काठमाडौँ । सरकारले समयमै सञ्चालन अनुमति प्रदान नगर्दा क्यासिनो प्राइड ९ह्यात होटल०को सुचारु हुन सकेको छैन । होटल ह्यातको क्यासिनो प्राइडले सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रियाहरु पूरा गरी सञ्चालनका लागि तयारी गरे पनि..
​नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेट पदमा १२० को लागि आवेदन माग, के के चाहिन्छ योग्यतारु
काठमाडौं । नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेट ९सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट०को जागिरका लागि आवेदन खुलेको छ। जम्मा १ सय २० जना अधिकृत क्याडेटको लागि जंगी अड्डाले आवेदन माग गरेको हो। १ सय २०..
​भारतमा १ महिनामा ३ पटक घट्यो इन्धनको मूल्य, नेपालमा कहिले?
काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतमा एक महिनाको अवधिमा तीन पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ । भारतबाटै पेट्रोलियम पदार्थ ल्याइने गरेको नेपालमा भने सो अवधिमा एक पटकमात्र मूल्य समायोजन गरिएको..
​विदेश जाने नेपाली कामदारलाई अमेरिकी दुताबासको प्रशिक्षण
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि मंगलबार देखि काठमाडौंमा प्रशिक्षण दिन सुरु गरिएको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाली कामदारका लागि प्रशिक्षण दिन थालेको हो । मंगलबार देखि सुरु भएको तीन दिने..
​८२ फुट फराकिलो बन्दै बुटवल सडक, तीन सय घर भत्किने
रूपन्देही । बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्क (चिडियाखोला)सम्मको सडकलाई ८२ फुट कायम गर्दा ३ सय घर भत्काउनुपर्ने अवस्था देखिएको सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले बताएको छ । कार्यालयले हालै गरेको नापीअनुसार सडकको..
​विमानस्थल भन्सारका ३४ मध्ये ३० कर्मचारी अनुपस्थित
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलका ३४ मध्ये ३० कर्मचारी शनिबार अनुपस्थित रहेको पाइएको छ । भन्सार विभागले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको र कार्य क्षेत्रमा अनुपस्थित भएकाका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न स्पष्टीकरण..
​इन्सपेक्टरको नतिजा प्रकाशित (नामावली सहित)
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) पदमा लिएको अन्तिम परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । समावेशी प्रावधान अनुसार पदपूर्ति गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट २४ असोज २०७१ मा प्रकाशित बिज्ञापन अनुसार..
लोक सेवा आयोगले शाखा अधिकृत तह लिखितकोे नतिजा प्रकाशित
काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले शाखा अधिकृत र सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं। १६५३०–१६५३६/०७१।७२, एकीकृत सेवा (न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र..
​भूकम्पपीडितलाई आत्मनिर्भर हुन आरन र सिलाइ मेसिन
चितवन । चितवनको शक्तिखोर र जुटपानी गाविसको सिमाना चौरमा स्थानान्तरण गरिएका भूकम्पपीडितलाई आत्मनिर्भर हुन विभिन्न सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। आरआरएन संस्थाले यहाँका भूकम्पपीडितलाई आफ्नो पेसाअनुसारका सामग्री उपलब्ध गराइएको संस्थाका प्रतिनिधि हेमराज..
मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिना श्रममन्त्री मलेसिया भ्रमणमा
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र भ्रमण निर्दे्शिकाको उल्लंघन गर्दै श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ आइतबार साँझ जम्बो टोली लिएर मलेसिया प्रस्थान गरेका छन् । मन्त्रीले विदेश भ्रमणमा जाँदा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनुपर्छ ।..
धितोपत्र बोर्डमा १६ जना अधिकृत लागि आवेदन खुल्यो, स्नातकोत्तर उत्तिर्णले आवेदन दिन सक्ने
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले १६ जना अधिकृत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने भएको छ । बोर्डले प्रशासन, लेखा र कानुन समूहमा १६ जना अधिकृत नियुक्त गर्न दरखास्त खुलाएको छ । बोर्डले प्रशासन..
​१८ सय ५० ट्याक्सीका लागि १६ हजारको आवेदन, आजदेखि म्याद सकियो
काठमाडौँ । सरकारले १३ वर्ष पछि पहिलो पटक गत असार ३ गते १८ सय ५० नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्ने निर्णय गरेकोमा आवेदन दिनेको संख्या १६ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ। यातायात..
​अनुजमणि तिमल्सिना सेञ्चुरी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतान नियुक्त
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अनुजमणि तिमल्सिनालाई नियुक्त गरेको छ । गणेशवहादुर श्रेष्ठको कार्यकाल सकिएपछि १६ महिनासम्म बैंकको प्रमुख कार्यकारी पद रिक्त थियो । केन्द्रीय बैंकले रिक्त..
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा गोविन्द पोखरेल नियुक्त
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेललाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा निुयक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारले असार १२ गते दाता..
राजनीतिक दलका नेताद्धारा बेरोजगारी भत्ताको माग
काठमाडौ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले व्यावहारिक ज्ञान, सीप र क्षमताका आधारमा राज्यले युवा वर्गलाई रोजगारी दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय युवा परिषद्, नेपालद्वारा यहाँ आयोजित साक्षात्कारमा नेताहरुले मुलुकभित्रै रोजगारीको सिर्जना..
नेपाल र इजरायल सरकारवीच सम्झौता, सरकारले नै कामदार पठाउने
काठमाडौं .नेपाली कामदार इजरायल पठाउने विषयमा नेपाल र इजरायल सरकारवीच आज सम्झौता भएको छ। श्रम मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र इजरायलका राजदूत यारोन मेयरले नेपाली महिला कामदार लैजाने..
​नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निरज गिरी र परिष्ठ पौडेल कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले दुई जना कार्यकारी निर्देशक बनाएको छ । बोर्डमा यस अघि कार्यकारी निर्देशकको पद थिएन् । बोर्डको पदपुर्ति समितिले निरज गिरी र परिष्ठ पौडेललाई कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा..
नेपाली सेनाका कामु प्रधानसेनापतिमा राजेन्द्र क्षेत्री
काठमाडौं । सरकारले नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी राजेन्द्र क्षेत्रीलाई कायम मुकायम प्रधानसेनापतिमा सिफारिस गरेको छ । शुक्रबार विहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले क्षेत्रीलाई कायम मुकायम प्रधानसेनापति बनाउन सिफारिस गरेको हो । हालका..
​इजरायल खुल्यो, ६५ हजारमै जान पाइने
काठमाडौं । पाँच वर्षदेखि नेपाली कामदार लैजान रोकेको इजरायल सरकारले महिला कामदार लैजाने भएको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको लामो पहलपछि इजरायली सरकार नेपाली महिला कामदार लैजान सहमत भएको हो। महिला..
​राष्ट्रिय प्रकृति सरंक्षण कोषमा जागिर खुल्यो, बरिष्ठदेखि सहायकमसम्म ७१ जनाको लागि
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले वरिष्ठ प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सहायकदेखि सहयोगी पदसम्मका लागि आवेदन फर्म खुलाएको छ। संरक्षण कोषले पद पुर्तिको लागि ७१ जनालाई करारमा जागिर खुलाएको हो। इच्छुक व्यक्तिले..
​सोमलाल सुवेदी मुख्य सचिवमा नियुक्त
काठमाडौं । सरकारको मुख्य सचिवमा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सोमलाल सुवेदी नियुक्त भएका छन्। आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सुवेदीलाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको हो। तीन दशकभन्दा लामो समयदेिख निजामित सेवामा..
Results 878: You are at page 27 of 30